Ogaden News Agency (ONA) – Sanadguuradii 3aad ee urur waynaha OYSU oo lagu qabtay xerada dhagaxlay
Sanadguuradii 3aad ee urur waynaha OYSU oo lagu qabtay xerada dhagaxlay
Maalinimadii ay taariikhdu kubeegnayd 28/06/2013 waxaa xerada qoxootiga ee dhagaxlay lagu qabtay xaflad balaadhan oo lagumaamuusayay sanad guurada 3aad ee ururka OYSU xafladan oo ahayd mid balaadhan oo aad loosoo qorsheeyay waxaana soo agaasimay faraca OYSU dhagaxlay oo kamid ah faraca midnimo ee kahowlgala xerada dhagaxlay
Munaasabada ayaa bilaabatay abaare 2:00 duhurnimo xiliga afrikada bari waxaana sidii caadada ahayd lagu furay aayado qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soojeediyay fadiilatul sh cabdiraxmaan. Sheekha ayaa kudheeraaday qiima allaah kacabsigu leehayay iyo fadliga halganka wuxuuna sidoo kale sheekhu dhalintii iyo guud ahaan dadkii madasha fadhiyay kuladardaarmay in ay gacmaha iswada qabsadaan si ay ugaadhaan guulaha ay higsanayaan.
Intaa kadib waxaa warbixin dheer madasha shirka kasoo jeediyay xoghayaha faraca OYSU dhagaxlay mudane Bashiir wuxuuna aad ugu dheeraaday wax qabadkii OYSU sanadihii ay jireen isagoo tibaaxay wax qabadkii faraha badnaa ee ay qaaradaha aduunka kasoo qabteen. Waxqabadkaas oo dhamaantiiba ahaa mid siwayn wax ugaqabtay halganka ay umada ree ogadenia kudoonayso in dhulkooda kuhantaan mudo dheera loogu jiray guluf colaadeed oo lala galay gumaysiga dhulboobka kucaanbaxay ee Ethiopia.
Sidoo kale waxaa lagu soodhaweeyay gudoomiyaha faraca MIDNIMO ee kahowlgala xerada dhagaxlay mudan Axmad oo khudbad qiimo badan kasoo jeediyay madasha shirka isagoo gudoomiyuhu sheegay in uu soodhawaynayo kuna faraxsanyahay wax qabadka aan laqarin Karin ee OYSU meelkastaba hajoogaane.
Dhanka kale OYSU dhagaxlay ayaa madasha shirka kusoo bandhigay barnaamij ay ugu magac dareen maskaxdaada iyo waxqabadkaaga kaasoo dhalinyarada lagu waydiinayay wax qabadkooda iyo wax ay maskaxda kuhayaan iyadoo dhalinta lawaydiindoono bishiiba 2 jeer.
Intaa kadib waxaa madasha shirka lagusoo dhaweeyay kooxda hilaac oo soobandhigtay gabayo, geeraaro iyo heeso aad uqiirabadan oo aad looladhacay.
Guntii iyo gabagabadii jawiga ayaa ahaa mid aad udagan wajiyada dadkii madasha fadhiyayna waxaa kamuuqday farxad aad ubadan.